बिहे पछी किन मोटाउछन महिलाहरु ? जानी राखौ – Waikhari
गृहपृष्ठ जीवन शैली बिहे पछी किन मोटाउछन महिलाहरु ? जानी राखौ
बिहे पछी किन मोटाउछन महिलाहरु ? जानी राखौ
बिबाहपछि अक्सर महिलाहरु मोटाउछन् । किन ? यसका एउटा मात्र कारण छैन । सामान्यतय बिबाहअघि युवतीहरुले आफ्नो फिगरमा बढी ख्याल गर्छन् । उनीहरु स्लिम देखिन रुचाउँछन् । राम्री देखिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि उनीहरु फिगर मेन्टेन गरिरहेका हुन्छन् । चाहे खानपानमा कटौती गरेर होस् वा व्यायाम गरेर, फिट एन्ड फाइन रहन रुचाउँछन् ।
आफुलाई भन्दा घरपरिवारको ख्याल
जबकी बिबाहपछि त्यस्तो चिन्ता हुँदैन । आफ्नो रुप एवं सौन्दर्यले कसैलाई मोहित गरिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । किनभने पति जो मिलिसकेको हुन्छ । सुरुवाती अवस्थामा रुपले एकअर्कालाई अकषिर्त गरेपनि बिबाहपछि रुप गौण हुन्छ । बरु, उनीहरुको व्यवहार, गुण, स्वभाव महत्वपूर्ण हुन्छ ।
बिबाह गरिसकेपछि सौन्दर्यको उति चिन्ता नहुने भएकाले पनि उनीहरु मोटाउँछन् ।